परमेश्वरका थुमा (भाग १) – Word of Truth, Nepal
परमेश्वरका थुमा (भाग १)
बप्‍तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई औंल्याउँदै एकपटक यसरी भने, “हेर, परमेश्वरका _________लाई, जसले संसारको ________ उठाई लैजानुहुन्छ” (यूहन्ना १:२९ र १:३६)। थुमाचाहिँ बलि चढाइने पशु थियो (दाँज्नुहोस् उत्पत्ति २२:६-८; प्रस्थान १२:३-७)। यहूदीहरूको वेदीमा चढाइने निर्दोष थुमाले ख्रीष्टको सिद्ध बलिदानको चित्रण गरेको हुन्थ्यो (हिब्रू १०:४-१४)। येशू ख्रीष्ट बलि चढाइने परमेश्वरबाटको थुमा हुनुहुन्थ्यो – उहाँ नै त्यो निर्दोष व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले संसारको पापका निम्ति दुःख सहनुभयो र मर्नुभयो। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ जसले हाम्रा निम्ति आफ्नै प्रिय पुत्रलाई बलिदान दिन इच्छुक हुनुभयो:
“उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी __________________, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई _________________” (रोमी ८:३२)
“किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई ________________” (यूहन्ना ३:१६)
यूहन्ना १८-१९ अध्यायका अध्ययनमा हामी कलवरी क्रूसको फेदीमैं पुग्नेछौं। त्यहीं नै मानिसका पुत्र मारिनलाई “उचालिनुभयो” (यूहन्ना ३:१४-१५; १२:३२-३३)। त्यहीं नै हामी पापीका सट्टामा मर्नुहुने परमेश्वरका थुमालाई नियालेर हेर्न पाउँदछौं।
यूहन्ना १८-१९ को रूपरेखा
ख्रीष्टलाई गिरफ्तार गरिएको (यूहन्ना १८:१-१४)
ख्रीष्टलाई इन्कार गरिएको (यूहन्ना १८:१५-१८, २५-२७)
ख्रीष्टको न्यायिक जाँच गरिएको (यूहन्ना १८:१९-२४, २८-४०)
ख्रीष्टलाई रद्द गरिएको (यूहन्ना १९:१-१५)
ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगिएको (यूहन्ना १९:१६-३७)
ख्रीष्टलाई चिहानमा गाडिएको (यूहन्ना १९:३८-४२)
ख्रीष्टलाई गिरफ्तार गरिएको
यूहन्ना १८:१ मा हामी सिक्छौं, येशूले प्रार्थना गरिसक्नुभएपछि (यूहन्ना १७ मा हेर्नुहोस्) उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई गेत्समनी नाउँ गरेको एउटा बगैंचामा लानुभयो। बगैंचामा येशूले के गर्नुभयो? उहाँका चेलाहरूले के गरे (पढ्नुहोस् मत्ती २६:३६, ३९, ४१, ४२, ४४)? _________________________। येशूलाई कहाँ भेट्टाउन सकिन्छ भनेर के धोकेबाज यहूदालाई राम्ररी थाहा थियो (यूहन्ना १८:२)? ______________
यूहन्ना १८:३ मा येशूलाई पक्रन आउने समूहको बयान गरिएको छ। “टोली” भन्ने शब्द सैनिक शब्दावलीअन्तर्गत पर्छ र यसले एउटा रोमी फौजको दसौं भागलाई जनाउँछ। एउटा फौजमा ६,००० सम्म सिपाही हुन्छन्। तसर्थ एउटा “टोली” मा ६,००० को दसौं भाग अर्थात् ६०० सिपाही हुन्थे। निस्तारचाडको अवसरमा यरूशलेममा मानिसहरूको खचाखच हुने भएकोले त्यहाँ सम्भावित विद्रोहलाई थाम्न सक्नलाई रोमी सिपाहीहरू पर्याप्त सङ्ख्यामा खटिएका हुन्थे। त्यसैले त ख्रीष्टलाई गिरफ्तार गर्न यहूदी शासकहरूले रोमी सिपाहीहरूको सिङ्गो टोली प्राप्त गर्न सके। त्यहाँ पूरा ६०० रोमी सिपाही नै थिए भनेर हामीले यकिन गर्न नसके तापनि तिनीहरू ठूलै सङ्ख्यामा आएका थिए भन्ने कुरा निश्चित छ। मत्तीले बताएको छ, यहूदाका साथमा एउटा ठू____ _________ (मत्ती २६:४७) थियो। चेलाहरूको त्यो सानो झुण्डलाई हातमा लिन सक्न उनीहरूको दलबल पर्याप्त थियो।
त्यहाँ यहूदी शासक वर्गका आफ्नै अफिसरहरू पनि थिए (यूहन्ना १८:३)। यस पदमा उल्लेखित “मुख्य पूजाहारी र फरिसीहरूपट्टिबाट अफिसरहरू” चाहिँ “मन्दिरका प्रहरीहरू” थिए (लूका २२:५२ सित तुलना गर्नुहोस्)। उक्त समूह हात-हतियार भिरेर आएका थिए कि खाली हात आएका थिए (यूहन्ना १८:३)? _____________________। एउटा निरस्त्र व्यक्ति र उहाँका साथमा रहेका एघार निरस्त्र चेलाका विरुद्धमा यहूदी-रोमी गठबन्धनको एउटा शसस्त्र जत्था नै उर्लेर आयो! ___________को ज्यो_____ (यूहन्ना ८:१२) लाई पक्राउ गर्न अन्धकारका सन्तानहरू बत्ती र राँका बोकेर आए (यूहन्ना १८:३)। उनीहरूले के-कस्ता हतियारहरू बोकका थिए (मर्कूस १४:४३)? ____________________________
घटनाक्रम यसरी अगाडि बढ्न गएकोमा के येशू आश्चर्यचकित हुनुभयो (यूहन्ना १८:४)? ____________। बरु गिरफ्तार टोली पो तीनछक पर्नेवाला थिए। यूहन्ना १८:४-६ राम्ररी पढ्नुहोस्। येशूले “म हुँ” भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो (मौलिक ग्रीक लेखोटमा ‘उही’ भन्ने शब्द छैन)। येशूले भन्नुभयो, “म हुँ!” अर्थात् “म नै हुँ!” येशूले आफू नै म हुँ भन्ने अद्वित्तीय, महान् यहोवा परमेश्वर हुनुभएको दाबी गर्नुभयो (दाँज्नुहोस्, प्रस्थान ३:१४; यूहन्ना ४:२६; ६:२०; ८:२४,२८,५८)। येशूले आफ्नो चिनारी यसरी दिनुहुँदा मानिसहरूको त्यस ठूलो भीडलाई के भएको थियो (यूहन्ना १८:६)? _____________________________ ___________________। के यहूदा इस्करयोती पनि भीडसितै भुइँमा पछारिएका थिए (यूहन्ना १८:५-६)? ____________। यहूदा कसको पक्षमा रहेछन् भन्ने कुरा अब सबैलाई छर्लङ्गै भयो! उनी प्रभुका शत्रुपक्ष रहेछन्। शत्रुहरूसितै उनी भुइँमा लडिरहेका छन्! कस्तो अचम्मको दृश्य: एकातिर सयौं तालिमप्राप्‍त रोमी सिपाहीहरू र यहूदीहरूको जमात भुइँमा सोतर परेको छ, अर्कोतिर मात्र एघार चेलाहरूसित निरस्त्र येशू चाहिँ खुट्टामा खडा भई उभिरहनुभएको छ! येशूको मुखबाट निस्केका दुई शब्द – “म हुँ!” – को नतीजा थियो यस्तो!
त्यो ठूलो जमात फेरि उठ्दै गर्दा, उनीहरूलाई येशूको मुक सन्देश यस्तो थियो, “हे मानिसहरूहो, मलाई गिरफ्तार गर्न म तिमीहरूलाई अनुमति त दिन्छु, तर वास्तवमा कसको नियन्त्रणमा को रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी जानीराख!” सबै कुरा परमेश्वरको पुत्रकै नियन्त्रणको घेराभित्र चलिरहेको थियो।
यूहन्ना १८:१०-११ अनुसार पत्रुस प्रभुलाई बचाउन भनी ठूलो जोशमा जाइलागेका थिए तर निशाना चुक्न गई उसको तरवारले माल्खस नाउँ गरेको मान्छेको कान च्वाट्टै काटियो! डाक्टर लूकाको अनुसार यसबारे प्रभु येशूले के गर्नुभयो (लूका २२:५१)? _____________________ _____________________। येशूलाई गिरफ्तार गर्न आउने व्यक्तिहरूले दुइटा आश्चर्यकर्महरू देखे:
येशूको दुई शब्द सुन्नेबित्तिकै सिङ्गो भीड भुइँमा पछारिएको (यूहन्ना १८:६)
येशूको अलौकिक सामर्थ्यले माल्खसको काटिएको कान निको पारिएको (लूका २२:५१)
येशूलाई गिरफ्तार गर्न आउने सेनालाई कुनै बाहाना थिएन। “उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न हामीलाई कुनै आधार थिएन” भनेर उनीहरू पन्छिन सक्दैनथे। के येशूलाई पत्रुसको मद्दतको खाँचो थियो त (मत्ती २६:५३)? _____________। (स्मरण होस्, एउटा पल्टनमा ६,००० सिपाहीहरू हुन्थे; बाह्र पल्टन स्वर्गदूतहरू भनेको ७२,००० स्वर्गदूतहरू हो!)। करिब ५३ दिन पछि पत्रुसले फेरि एउटा तरवार ख्रीष्टका शत्रुहरू विरुद्ध चलाए र त्यस पटक उनी सफल भए! त्यस पटक उनको तरवारले एउटा कान काट्ने भन्दा ठूलो काम गर्‍यो, त्यसले त हजारौंको हृदयलाई छेंड्यो। यसबारे हामी प्रेरित २:१४,३६,३७,३८,४१ पदहरूमा पढ्छौं। प्रेरित २:३७ को “छेंडियो” शब्दको अर्थ हो “घोच्यो, रोप्यो”। उनीहरूको “मुटु छेंडियो”। पत्रुसले प्रयोग गरेको तरवारलाई हिब्रु ४:१२ मा बयान गरिएको छ। के परमेश्वरले हामीले पनि यही तरवार प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ (एफेसी ६:११,१७)? _____________
के यहूदी र रोमी सिपाहीहरूले येशूलाई पक्रेर गिरफ्तार गरे (यूहन्ना १८:१२)? _____। तर के उनीहरूले उहाँलाई साँच्ची नै पक्रेका थिए त? येशूले यूहन्ना १०:११,१७,१८ मा सिकाउनुभएको कुरालाई स्मरण गरिनुपर्छ। येशूले उनीहरूलाई अनुमति दिनुभएको कारणले मात्र उनीहरूले येशूलाई पक्रन सकेका हुन्। येशूले स्वेच्छापूर्वक आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, यसैले उनीहरूले उहाँलाई पक्रन सके। नत्रभने उनीहरूले उहाँलाई पक्रनु असम्भव हुनेथ्यो (तुलना गर्नुहोस् यूहन्ना ७:३०; ८:२०; आदि)। प्रभुले आफैंले आफैंलाई यसरी सुम्पनुको कारण के थियो (गलाती २:२०; एफेसी ५:२,२५)? _________________________। मानिसले उहाँलाई क्रूसमा पुर्‍याएको होइन। उहाँको प्रेमले हो! पापी मानिसलाई बचाउन ख्रीष्ट यहाँसम्म इच्छुक हुनुहुन्थ्यो! प्रश्‍न उठ्छ, तपाईंचाहिँ उहाँद्वारा बचाइनलाई कत्तिको इच्छुक हुनुहुन्छ? (यूहन्ना ५:४० को खेदपूर्ण भनाइसित तुलना गर्नुहोस्)।
पत्रुस येशूसँगै हुँदा उनले माल्खसको कानलाई बडो साहसका साथ काटिदिएका थिए। तर केही बेरपछि यी साहसी पत्रुस डरपोक पत्रुस बने। मर्नुपरे तापनि प्रभुलाई पछ्याउनेछु भन्ने पत्रुस (यूहन्ना १३:३७) आफ्ना प्रभुलाई तीन-तीनपटक इन्कार गर्नेवाला थिए (यूहन्ना १३:३८)!
ख्रीष्टलाई इन्कार गरिएको
यूहन्ना १८:१५-१६ मा उल्लेखित “अर्को चेला” सम्भवत: यूहन्ना आफैं थिए जसले लेखेका सुसमाचारको अध्ययन हामी गर्दैछौं। येशू पक्राउ पर्नुभएपछि सबै चेलाहरू भागाभाग गरे (मत्ती २६:५६) तर पत्रुस र यूहन्ना फर्केर आए। महापुजारीसित यूहन्नाको पहुँच थियो (यूहन्ना १८:१५) जसको कारण उनी पत्रुसलाई साथमा लिई दरवारको परिसरभित्र पस्न सफल भए (यूहन्ना १८:१६)।
आफू बलियो छु भनी पत्रुसले सोचेका थिए (यूहन्ना १३:३७) तर आफू वास्तवमा कति दुर्बल छु भनेर उनले सिक्ने बेला आइपुगेको थियो। पत्रुसको पहिलो इन्कार यूहन्ना १८:१७ मा पाइन्छ। एउटी स्त्रीले सोधेकी प्रश्‍नलाई यसरी अनुवाद गरिनुपर्थ्यो, “तिमी यस मानिसका चेलाहरूमध्येका एउटा हौ र?” (तिनले नकारात्मक जवाफको अपेक्षा गरेकी थिइन्)। के पत्रुसले सत्य बोले? __________। पत्रुसले केवल झूट बोलेका थिएनन्, उनले त आफ्ना प्रभुलाई इन्कार गर्दैथिए!
पत्रुसले आफ्नो प्रभुलाई इन्कार गरे। आफ्नो जवाफद्वारा उनले यसो भन्दै थिए: “नासरतको येशूसित मेरो कुनै सम्बन्ध छैन।” आफ्नो जीवनको यस घडीमा पत्रुस येशूको चेला कहलिन शर्माएका थिए कि गर्ववान्वित भएका थिए (यूहन्ना १८:१७)? ____________। तपाईं येशू मुक्तिदातादेखि शर्माउनुहुन्छ कि उहाँमा गर्व गर्नुहुन्छ? आफू येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ भनेर अरूले जानेको तपाईं चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? कसैले तपाईंलाई, “के तिमी बाइबल विश्वास गर्ने ख्रीष्टियन हौ” भनेर सोध्यो भने तपाईंले कसरी जवाफ दिनुहुनेछ? पत्रुसले यसरी जवाफ दिनुपर्नेथ्यो, “हो, म हुँ! म गर्वसित भन्दछु, म येशूको चेला हुँ। उहाँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ र म उहाँको चेला हुँ।”
दोश्रो इन्कार यूहन्ना १८:२५ मा पाइन्छ। तिनीहरूले पत्रुसलाई सोधे, “तिमी उसका चेलाहरूमध्ये एकजना हौ र?” (तिनीहरूले नकारात्मक जवाफको अपेक्षा गरेका थिए)। के पत्रुसले झूट बोल्दै उहाँलाई इन्कार गरे? ____________
तेश्रो र अन्तिम इन्कार यूहन्ना १८:२६ मा पाइन्छ। आखिरी पटक प्रश्‍न गर्ने पुरुष माल्खसका आफन्त थिए (यूहन्ना १८:१० सित दाज्नुहोस्)। उनी पनि गिरफ्तारीको बेलामा बगैंचामै थिए र त्यहाँ पत्रुसले उनका आफन्तको कान काटिदिएका देखेका थिए। यो मान्छे पत्रुस नै हुनुपर्छ भन्ने उसलाई करिब पक्का भइसकेको थियो। तर उनी निश्चित भइसकेका थिएनन्। उनको प्रश्‍नलाई यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ: “मैले तिमीलाई बगैंचामा देखेको होइन र?” (उनले सकारात्मक जवाफको अपेक्षा गरेका थिए)। पत्रुसले यस प्रश्‍नको जवाफ कसरी दिए? पत्रुसले यसरी भन्नुपर्नेथ्यो, “हो, मैले सत्य बोल्नैपर्छ। येशूसित बगैंचामा तिमीले देखेको मान्छे म नै हुँ। तिम्रो आफन्तको कान काटिदिने म नै हुँ।” के पत्रुसले यस्तै भने (यूहन्ना १८:२७)? ___________। येशूले यूहन्ना १३:३८ मा गर्नुभएको भविष्यवाणी के साँचो ठहरियो? _________
मत्ती १०:३२-३३ पढ्नुहोस्। कुनचाहिँ पदमा पत्रुसले गरेको कामको बयान गरिएको छ? ______। कुनचाहिँ पदमा हामीले गर्नुपर्ने परमेश्वरको इच्छाको बयान गरिएको छ? _______। जसरी एउटा बोतलको बाहिरपट्टि टाँसिएको कागतको लेबुलले बोतलभित्र भएको पद्धार्थलाई सङ्केत गर्दै त्यसको अस्तित्वलाई “स्वीकार” गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक विश्वासीले आफूभित्र वास गर्नुहुने प्रभु र मुक्तिदातालाई विनाशर्म प्रस्टै स्वीकार्नुपर्छ (रोमी १०:९-११)। पावलले भनेजस्तै हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ: “म ख्रीष्टको ______________देखि ____________” (रोमी १:१६)। पत्रुस आफ्नो प्रभुदेखि शर्माए। के त्यसो गरेकोमा पत्रुस पछिबाट दुःखित भए (लूका २२:५९-६२)? ________। पत्रुस पापमा लडे, बेसरी नै लडे, तर उनी फेरि उठे! करिब ५३ दिन बितेपछि पत्रुसले साहसका साथ, विनाडर हजारौं यहूदीहरूका सामु ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्ने काम गरे (हेर्नुहोस्, प्रेरित २:१४,२२-२४,२९,३६,४१)! उनी उप्रान्त कहिल्यै येशूदेखि शर्माएनन् बरु आफ्ना प्रभुका लागि मारिन पनि तयार भए अनि ठीक त्यस्तै भयो पनि (तुलना गर्नुहोस् यूहन्ना २१:१७-१९)। पत्रुस र यहूदाबीच ठूलो अन्तर छ। दुवैले प्रभुलाई धोका दिएका हुन्—यहूदाले विश्वासघात गरेर र पत्रुसले इन्कार गरेर। पत्रुसले पश्चात्ताप गरे अनि फर्के तर यहूदाले त्यसो कहिल्यै गरेनन्।
ख्रीष्टलाई न्यायिक जाँच गरिएको
पवित्रशास्त्रले बताउँछ, उहाँको गिरफ्तारीको लगत्तैपछि येशू ख्रीष्ट प्रारम्भिक छानबिनका लागि सर्वप्रथम ___________ (यूहन्ना १८:१३) कहाँ लगिनुभयो। यी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को थिए?
हन्नास सम्भवतः यरूशलेमका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्ति थिए। उनले ई.सं. ७-१५ सम्म महापूजाहारीको कार्यभार सम्हाले, तर ई.सं. १५ मा उनको पदावधि समाप्‍त भएपछि पनि उनी उक्त दर्जाले नै चिनिन्थे (हेर्नुहोस् लूका ३:२; यूहन्ना १८:१९,२२; साथै प्रेरित ४:६ मा उनलाई “महापूजाहारी” भनी जनाइएको छ यद्यपि उनी खास महापूजाहारी थिएनन्)। हन्नास _____________ को ससुरा थिए (यूहन्ना १८:१३; यूहन्ना ११:४९-५२ मा हामीले यिनै व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गरेका थियौं)। पूजाहारी गठबन्धनमाथि हन्नासले ठूलै प्रभाव जमाएका थिए। भन्नुपर्दा, उनका पाँच भाइ छोराका साथसाथै उनका ज्वाइँ कायफा र उनका नाती मत्तीयाससमेतले महापूजाहारीको पद सम्हाले। येशूलाई इन्साफ गरिँदाको समयमा हन्नास एक वयोवृद्ध, अनुभवी तथा धनी व्यक्ति भइसकेका थिए। महापूजाहारीको पदमा नरहे तापनि जनसमाजको नजरमा महापूजाहारी उनी नै थिए, र महत्त्वपूर्ण मामिलामा प्रायः उनकै सल्लाहलाई मान्यता दिइन्थ्यो। त्यसैले येशू “प______ हन्नासकहाँ” (यूहन्ना १८:१३) लगिनुभएको कुरा पढ्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्दैन।
हन्नासले येशूलाई दुइटा विषयमा प्रश्न गरे, ती के थिए (यूहन्ना १८:१९)?
उहाँका _______________ र
उहाँको _______________को विषयमा
हन्नासको प्रश्‍नको तात्पर्य यो थियो कि येशूले रोमका विरुद्ध सम्भावित राजनैतिक विद्रोह मच्चाउने उद्देश्यमा क्रान्तिकारीहरू (उहाँका चेलाहरू) लाई बटुल्दैहुनुहुन्छ। अनि उनी यो चाहन्थे कि येशूले कुनै त्यस्तो कुरा प्रकट गर्नुभएको होस् (उहाँको शिक्षा) जसको आधारमा उहाँलाई रोमी शासनलाई पल्टाउन खोज्नुभएको दोष लगाउन सकियोस्। विद्रोह र राजद्रोहको दोषीलाई अथवा यस्ता कुराको केवल अभियोग मात्र लागेको व्यक्तिलाई रोमी सरकारले बाँकी राख्‍नेछैनन् भन्ने कुरा हन्नासलाई राम्ररी थाहा थियो। यसर्थ हन्नास यो चाहन्थे कि येशूले आफ्नै विरुद्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्नुभएको आधारमा उहाँलाई दोषी ठहराउन सकियोस्।
यूहन्ना १८:२०-२१ मा प्रभुको गहकिलो प्रत्युत्तरलाई विचार गर्नुहोस्। उहाँको भनाइको तात्पर्य यो थियो, “आफ्नै विरुद्धमा गवाही दिन म इन्कार गर्छु। व्यवस्थाबमोजिम तिमीहरूले साँचो साक्षीहरू खडा गराऊ।” यस न्यायोचित माग राख्‍नेबित्तिकै येशूले एउटा यहूदी अफिसरको हातबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्‍यो जसले “येशूलाई…____________ लगायो” (यूहन्ना १८:२२)। त्यसले मुड्की पारेर होइन तर पाँच औंला फिँजाएर बेसरी थप्पड लगाएका थिए। त्यसपछिका घडीहरूमा येशूले त्यस्ता कैयौं पिटाइहरू सहनुपर्‍यो; योचाहिँ पहिलो थियो। यूहन्ना १८:२३ मा प्रभुले राख्‍नुभएको प्रश्‍नको जवाफ त्यस अफिसरले दिन सके होलान्? ____________। मानवजातिका लागि क्रूसमा मर्न जाने क्रममा उहाँ ज्यादै निर्मम शारीरिक यातनाहरू भोग्नलाई राजी हुनुपरेको थियो। प्रश्‍न उठ्छ, तपाईंचाहिँ मुक्ति पाउनलाई कत्तिको राजी हुनुहुन्छ?
हन्नाससितको भेटपछि येशू कता लगिनुभयो (यूहन्ना १८:२४)? _______________। वास्तवमा महापूजाहरी यिनी थिए (यूहन्ना ११:४९; १८:१३)। कायफा र हन्नास उस्तै चरित्रका थिए, दुवैले येशूलाई उत्तिकै घृणा गर्थे। कायफाका सामु भएको ख्रीष्टको न्यायिक जाँचको बारेमा जान्नलाई सुसमाचारका अन्य पुस्तकहरूमा पढ्नुपर्ने हुन्छ (मर्कूस १४:५३-६५ आदि)।
यहूदीहरूले येशूलाई बाँधे अनि उहाँलाई रोमी राज्यपालकहाँ लगे जसको नाउँ पिलातस थियो (यूहन्ना १८:२८-२९)। यहूदीहरू ख्रीष्टलाई मृत्युदण्ड दिन चाहन्थे तर उनीहरू आफैं त्यसो गर्न सक्दैनथे। यूहन्ना १८:३१ अनुसार मृत्युदण्ड दिने अधिकार केवल रोमी सरकारको हातमा थियो। ख्रीष्टलाई यहूदीहरू आफैंले मार्न सकेका भए उनीहरूले सम्भवतः ढुङ्गा हानेर मार्ने थिए (यूहन्ना ८:५९ र १०:३१ सित दाँज्नुहोस्)। अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने रोमीहरूको तरिकाचाहिँ क्रूस थियो। यसर्थ, येशूले आफू “मारिनलाई उचालिने” कुरा (यूहन्ना १२:३२-३३ र यूहन्ना १८:३२) गर्नुहुँदा उहाँ कस्तो कुरा गर्दैहुनुहुन्थ्यो सो राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो।
यूहन्ना १८:२८ मा ख्रीष्टको हत्या गर्न चाहने यी यहूदीका बारेमा एउटा उल्लेखनीय कुरा बताइएको छ: “अनि अशुद्ध नहोऔं, तर निस्तार-चाडको भोज खान सकौं भनेर तिनीहरू आफैचाहिँ राजभवनभित्र पसेनन्” (यूहन्ना १८:२८)। यिनीहरू मानव इतिहासकै सबैभन्दा घोर अपराधमा संलग्न भइरहेका थिए र पनि आफूहरू एउटा विधर्मीको राजभवनमा पसेर अशुद्ध होऔंला भन्ने कुराको उनीहरू फिक्री गर्दै थिए! यो त एउटा डाँकूको कथा जस्तै हो जो एउटा बैङ्किङ् कार्यालयभित्र पस्नुअघि भित्र फोहोर नलागोस् भनेर आफ्नो जुत्ताको धुलो राम्ररी टकटक्याउँदछ अनि भित्र पसेपछि उसले खजाञ्चीलाई गोली हानेर १ करोड रूपैयाँ लुटेर भाग्छ! यिनीहरू आफ्नो चियामा परेको सानो भुसुनाको फिक्री गर्दैथिए तर सिङ्गो ऊँट निल्न उनीहरूलाई कुनै ठूलो कुरा लागिरहेको थिएन (मत्ती २३:२३-२४ सित तुलना गर्नुहोस्)। आफूहरू निकृष्टतम तवरले अशुद्ध भइसकेको कुरालाई उनीहरूले महसुस गर्न सकेनन्! उनीहरू त आफूले बाँधेका कैदीका सामु घोप्टो परेर दयायाचना र क्षमायाचनाका लागि रूँदै कराउनुपर्थ्यो! धर्म भनिने कुराको दुःखद वास्तविकता नै यही हो जब मान्छे पवित्र परमेश्वरकहाँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै आउनुको सट्टा आफ्नो दुषित हृदयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दछ।
पिलातसले येशूलाई एउटा सरल प्रश्न गरे: “के तिमी यहूदीहरूका __________ हौ?” (यूहन्ना १८:३३) “के तिमी राजा हौ?” येशूले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुभयो। यूहन्ना १८:३६ मा येशूले तीन-तीनपटक “मेरो __________” भन्नुभयो! राज्य भएको व्यक्ति __________ नै हुनुपर्छ! यूहन्ना १८:३७ मा येशूले उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो कि स्वीकार गर्नुभयो? ________________________। साथै येशूले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि उहाँका सेवकहरू न यहूदीहरूको विरुद्धमा लड्नेवाला थिए न ता रोमीहरूको विरुद्धमा (यूहन्ना १८:३६)। अब यस्तो किसिमको राजा न पिलातसका लागि खतराजनक हुन सक्थे न ता रोमी सरकारका लागि। त्यसैले पिलातसले आफ्नो फैसला दिए, “म उसमा एउटै पनि _________ पाउँदिनँ” (यूहन्ना १८:३८)। तर ख्रीष्ट क्रूसमा टँगाइएको नदेखेसम्म यहूदीहरूलाई चित्त नबुझ्ने भएको थियो। उनीहरू चाहन्थे, दोषी बरब्बा छुटाइएको र निर्दोष ख्रीष्ट क्रूसमा टँगाइएको (यूहन्ना १८:४०)। बरब्बाचाहिँ एउटा ________ थियो (यूहन्ना १८:४०); अहिलेको बोलिचालीमा उसलाई “आतङ्ककारी” को संज्ञा दिन सकिन्छ; उसलाई भनौं “यहूदी मुक्ति मोर्चा” को सदस्य मान्न सकिन्छ। आतङ्ककारी कार्यकलाप गर्ने क्रममा उसले हत्या गरेका थिए (मर्कूस १५:७ र प्रेरित ३:१४)।
पिलातसले येशूलाई सोधेका अर्को एउटा प्रश्न थियो। उक्त प्रश्न यूहन्ना १८:३८ मा पाइन्छ – “__________ के हो?” पिलातसले ठीक व्यक्तिसँग ठीक प्रश्न गरेका थिए! प्रभु येशूले उनलाई दिनुहुने जवाफ सुन्नलाई के पिलातस पर्खेर बसे (यूहन्ना १८:३८)? ___________। पिलातस जवाफ पर्खेर बसेका भए येशूलाई उनलाई के जवाफ दिनुहुनेथियो होला (यूहन्ना १४:६ र यूहन्ना १७:१७ पढ्नुहोस्)? _______________________________________________
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 14:15:072020-11-27 14:00:34परमेश्वरका थुमा (भाग १)
महान् महापुजाहारीपरमेश्वरका थुमा (भाग २)